Archive du 20190123
Lalao Ravalomanana Kotrehina hosoloina PDS
Misy siosion-dresaka heno amin’izao fotoana izao fa kotrehina mafy hoesorina amin’ny toerany ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ka hosoloina Prezidan’ny Delegasionina manokana na PDS.
Olona manana zom-pirenena roa Homena vahana ao anaty fanjakana
Mandeha ny fanendrena olom-panjakana ambony eto amin’ny firenena amin’izao izay nosantarina tamin’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny sekretera jeneralin’ny fiadidian’ny Repoblika Valery Ramonjavelo
Fiatrehana fifidianana Mila fanabeazana ara-politika ny Malagasy
Zava-dehibe eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana ny fanabeazana ara politika mba ahafahana mamolavola tanora tompon’andraikitra.
Dibo-drano, velirano, tondra-drano Avaradrano, afovoan-tany, atsimondrano Asa lahy na tena toetr'andro sa tsodrano ? Fa dia hatrany an-tokantrano aza tapaka ny rano.
Zava-doza tany Mahajanga Nihoatra ny “bord” ny ranomasina
Nampivarahontsana ny nahita ny zava-nisy tao Mahajanga omaly maraina. Natsipin’ny rano nihoatra ny “bord” izay vita rarivato ireo vato mavesatra milahadahatra amin’iny sisin-dranomasina akaikin’ny Baobab iny.
Voina noho ny fihotsahan’ny tany Telo andro aty aoriana vao niteny Rajoelina
Manoloana ny fihotsahan’ny tany teny amin’ny fokontany Tsimialonjafy, Ampamarinana, ny alin’ny sabotsy 19 janoary 2019 lasa teo,
Fihotsahan’ny tany teny Tsimialonjafy Olona efatra mbola tsy hita popoka
Mbola tsy hita hatramin’ny omaly hariva fotoana nanoratanay ny olona efatra voalaza fa tototry ny tany sy ny vato vokatry ny fihotsahan’ny tany etsy amin’ny Fokontany Tsimialonjafy Ambanin’Ampamarinana.
Fanotorana tany etsy sy eroa Hofehezina amin’izay ve ?
Tena tompony mangataka atiny ny Malagasy amin’izao ary inoana fa hojeren’ny filoham-pirenena vaovao ny fanamorana ny fahafahany manorina sy mampiasa vola amin’ireny lalam-baovao, izay lesoka tamin’ny fitondrana teo aloha ireny.
Paositra Malagasy Mivonona amin`ny fivoaran’ny teknolojia
Tsy azo ihodivirana intsony ny fandrosoana ara-teknolojika manerana izao tontolo izao ary miroso amin`izany i Madagasikara.
Fitantanana ny Barean’i Madagasikara Maniry ny hanaovana soniam-pifanarahana i Nicolas Dupuis
Na dia eo aza ny fanendrena azy ho « Coach » ny ekipan’ny FC Fleury, Diviziona Nasionaly faha-2 any Frantsa, dia nanambara ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa mijanona ho laharam-pahamehana ho azy ny fikarakarana sy fijerena manokana ny Barea Malagasy.
Ligin’ny baolina kitra Atsimo Andrefana Hiditra amin’ny dingana faha-2 amin’ny alahady izao
Tontosa tamin’ny alahady 20 janoary teo tao amin’ny kianjan’Andaboly Toliara tamin’ny alalan’ny fanatontosana ny andro faha-4 farany ny dingana voalohany amin’ny fiadiana ny ho
Inona ity mitaredretra ity ?
Anaty loza tanteraka ny ampahana Malagasy amin’izao fotoana izao noho ny fiantraikan’ny vaninandro fahavaratra. Efa namoizana ain’olona am-polony teto an-drenivohitra.
Mpampianatra sy mpanabe Miandry minisitra tena mahavita azy
Niray feo teto Antananarivo omaly ireo solontenan’ny mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy mivondrona ao anatin’ilay antsoina hoe “Collectif des DREN et Chef Cisco”.
Mpandraharaha Malagasy Olana hatrany ny vola ampiasaina
Tokony hojerena haingana ny olan’ny mpandraharaha Malagasy ireo satria efa halohalika ny ranom-bary ary inoana fa hisy fanapahan-kevitra mafonja mihitsy hivoaka avy amin’ny fitondram-panjakana vaovao.
NIREFOTRA NY BASY TENY ANDOHARANOFOTSY
Raikitra ny tifitra tetsy Andoharanofotsy. Nisy nanafika ny tokantrano iray ary hitan’ny tompon-trano ny niavian’ireo olon-dratsy.
Nitrangana fanafihan-dahalo tany amin`ny fokontany Antanantsoa, kaominina Anosibe ao amin`ny distrikan`Imanja omaly talata 22 janoary tamin`ny 04 ora maraina.
Fampahantrana an`i Afrika Sazio i Lafrantsa, hoy i Luigi Di Maio
Taorian`ny fifindra-monina eo amin`ny firenena Atsimo sy Avaratra, izay tena nirongatra an-taonany maro dia misedra ny krizin`ny mpifindra monina i Italia amin`izao.
Orinasa Ambatovy Manohana ny ady amin’ny kitrotro
Nanolotra fanafody sy kojakoja fampiasa amin’ny fitsaboana (Seringues, cathéters, perfuseurs) tao Toamasina ny orinasa Ambatovy ny 21 janoary 2019 ho fandraisany anjara amin’ny ady atao amin’ny
Mpivarotra amoron-dalana Nalamina ny teny Antaninarenina sy Petite Vitesse
Anisan’ny tena miteraka ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy mandoto tanàna ireo mpivarotra amoron-dalana. Misy fotoana mantsy izy ireny milatsaka anaty arabe mihitsy no mivarotra sady tsy manadio ny toerana nialany ihany koa rehefa hariva ny andro, antony mampisavovona ny fako eny amin’ny arabe.
Fianakavian’ireo namoy ny ainy teny Tsimialonjafy Tsy nanadino azy ireo ny kaominina Antananarivo Renivohitra
Tsy namela irery ireo traboina sy mana-manjo vokatry ny fihotsahan’ny tany teny Tsimialonjafy ny kaominina Antananarivo Renivohitra tarihin’ ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana.
Traboina noho ny fihotsahan’ny tany Tsy mamela ho irery azy ireo ny Ben’ny tanàna
Hatramin’ny omaly, dia razana 4 no mbola karohina tamin’ireo 18 nihotsahan’ny tany tesy amin’ny fokontany Tsarafaritra Tsimbazaza sy Tsimialonjafy ny sabotsy hariva teo,